Fihaonana an-tampon’ny “notaire” aty Afrika : Tanterahina etsy amin’ny Carlton mandritra ny 5 andro -
AccueilSongandinaFihaonana an-tampon’ny “notaire” aty Afrika : Tanterahina etsy amin’ny Carlton mandritra ny 5 andro
Voafidy hampiantrano ny fihaonamben’ny “notaire” aty Afrika andiany faha-13 Madagasikara. Araka izany, nosokafana tamin’ny fomba ôfisialy omaly, tetsy amin’ny Hotel Carlton izany ary haharitra dimy andro. Saika tazana nanotrona izany fanokafana izany ireo tompon’andraiki-panjakana ambony maro eto amintsika.
Araka izany, nampitondraina ny lohahevitra “Ny zo’ny notaire ary ny fanatontoloana: ahoana ny fomba fijery”. Noho izay indrindra, hikaon-doha manoloana ny olana sedrain’izy ireo, ireo notaire aty Afrika, anisany amin’izany ny eto Madagasikara, izay tena mbola misedra olana goavana amin’ny fisolokiana.
Nambaran’ny filohan’ny “notaire” eto Madagasikara, Rijanirina Razanadrakoto, mantsy fa maro ireo tratran’ny fisolokiana eo amin’ny fanaovana raharaham-barotra. Voalaza anefa fa ny lalàna no mametraka ny fisian’ny notaire hanatanteraka ny asany mahakasika izany. Tsy voahaja io lalàna io hatramin’izao , satria raha ny nambaran’ity filohan’ny notaire eto Madagasikara ity hatrany, dia misy ny fisolokiana avo lenta ka rehefa niharan’izay ilay olona vao manantona notaire, nefa amin’izay fotoana izay, dia tsy misy azon’ny notaire atao intsony. Notsindriany fa efa misy sora-bola na/sy sarany voafaritra ny an’ny notaire fa tsy tokony hisy fahasamihafana velively. Izany rehetra izany mantsy mbola olana sedrain’ny notaire avokoa. Tsy eto amintsika ihany fa hatrany Afrika.
Noho izay indrindra no hisian’ny Fihaonambe hifanakalozana sy hifampizarana, ary hamahana ireo olana sedrain’ny notaire ireo. Saingy, mifototra tanteraka amin’ny lohahevitra ny fihaonamben’izy ireo.